သင့်ရဲ့မွေးလက သင့်ကျန်းမာရေးနှင့် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအပေါ် ဘယ်လိုလွှမ်းမိုးမှုရှိသလဲ? - Lifestyle Myanmar
မေလမှာ မွေးဖွားသူတွေဟာ အကောင်းမြင်သူများ ဖြစ်လေ့ရှိပြီး နိုဝင်ဘာလမှာ မွေးဖွားသူတွေေဟာ ကမ္ဘာကြီးကို ဆန့်ကျင်ဘက်အမြင်တွေနဲ့ ကြည့်လေ့ရှိတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ သုတေသီများစွာက ၎င်းတို့မွေးဖွားသော ရာသီနှင့် လအပေါ် ဘယ်လိုကွဲပြားနိုင်တယ်ဆိုတာကို နားလည်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ကြပြီး အောင်မြင်မှု ရရှိခဲ့ကြပါတယ်၊ လေ့လာမှုတစ်ခုအရ သင့်ရဲ့မွေးဖွားရာသီနှင့် လဟာ သင့်ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့် အရည်အချင်းကို လွှမ်းမိုးနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တကယ်တော့ အခြေအနေ ၁၆၈၈ခုကို လေ့လာရင်း လူ၁.၇သန်းဆီကနေ ကောက်ယူရရှိထားတဲ့ အချက်အလက်တွေအရ သင့်ကျန်းမာရေးပေါ်မှာလည်း လွှမ်းမိုးနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဇန်နဝါရီလမှာ မွေးဖွားသူတွေဟာ ဆေးပညာနဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင် အားကစားသမားတွေ ဖြစ်လာလေ့ရှိပါတယ်။ ထိုသူတို့ဟာ ဖန်တီးမှုနှင့် ကျော်ကြားသူတွေ ဖြစ်လာဖို့ ပိုများပါတယ်။ သင့်ကျန်းမာရေးက သာမန်ထက် ပိုမိုကောင်းမွန်ပါတယ်။ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးကို ပိုမိုကာကွယ်ပြီး အာရုံစိုက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ စိတ်တိုဒေါသထွက်တာမျိုး နည်းပါးသော်လည်း စိတ်ကစဉ့်ကလျားရောဂါနှင့် စိတ်အတတ်အကျမြန်ရောဂါတွေဟာ ဇန်နဝါရီလမွေးဖွားသူတွေကြားမှာ အဖြစ်များပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီလမွေးတဲ့ ကလေးတွေဟာ သူတို့ဘဝနဲ့ အလုပ်အကိုင်တွေမှာ ပျော်ရွှင်ကြလေ့ရှိပါတယ်။ထို့အပြင် ပုံမှန်ထက်စောပြီး မွေးဖွားနိုင်တဲ့ အလားအလာများစွာလည်း ရှိပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီဟာ တီထွင်ဖန်တီးမှုလလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဟာ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုနိုင်ပြီး ကျော်ကြားသူတစ်ယောက်တောင် ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သတ်လို့ အလုံးစုံရောဂါတွေကနေ ကာကွယ်ထားပါတယ်။ ထို့အပြင် သင့်မှာ အာရုံကြောဆိုင်ရာ၊ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာနှင့် မျိုးဆက်ပွားရောဂါများမှ ကာကွယ်မှုအချို့ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
မတ်လဟာ နေရောင်ခြည်ကို ကြိုဆိုတဲ့လဖြစ်ပြီး ဒီလမှာ သင်မွေးဖွားလာပါက သင်ဟာ ဘဝရဲ့ အကောင်းဘက်ခြမ်းကို ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင် နွေဦးရာသီမှာ မွေးဖွားသောလူအများစုဟာ အမြဲတမ်း စိတ်ကောင်းရှိပြီး အပြုသဘောဆောင်လေ့ရှိပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သတ်လာရင် မတ်လမွေးဖွားသူတွေဟာ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ စနစ်ကို စောင့်ကြည့်နေဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
မတ်လမှာ မွေးဖွားသူတွေလိုပဲ ဧပြီဖွားကလေးတွေဟာ ဆောင်းရာသီမှာ မွေးဖွားသူတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် အပြုသဘောပိုဆောင်လေ့ရှိပါတယ်။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနဲ့ ပတ်သတ်လာရင် ဧပြီဖွားလေးတွေဟာ မတူညီတဲ့ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရေးတွေကို ရွေးချယ်ခွင့်ရှိနိုင်ကြပါတယ်။ အလုံးစုံကျန်းမာရေးပြဿနာတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သင့်မှာ ကောင်းမွန်တဲ့ ကာကွယ်မှုရှိပေမယ့်လည်း သင့်ရဲ့ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကို စောင့်ရှောက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် သင့်မှာ ADHD ဖြစ်ဖို့ အခွင့်အလမ်းနည်းပါတယ်။
မေလမှာ မွေးဖွားသူဆိုရင် သင်ဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကံအကောင်းဆုံးသူလို့ ယူဆပါလိမ့်မယ်။ သင်ဟာ အကောင်းမြင်သူတစ်ယောက်အဖြစ် မွေးဖွားလာသူဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်အကိုင်အမြင်ဘက်ကကြည့်ရင် သူတို့ရဲ့ ရွေးချယ်မှုက ကျယ်ပြန့်တာကြောင့် သူတို့ဟာ အလုပ်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာသာ အာရုံစိုက်ဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။ မေလမွေးဖွားသူတွေဟာ အန္တရာယ်များတဲ့ရောဂါတွေ ဖြစ်တာမျိုး မရှိပါဘူး။ သို့သော် လေ့လာမှုတွေအရ သူတို့ဟာ အကောင်းမြင်သူတွေဖြစ်သော်လည်း စိတ်ကျရောဂါတော့ ခံစားရလေ့ရှိပါတယ်။
ဇွန်လမှာ မွေးဖွားသူတွေဟာ မတ်၊ ဧပြီနှင့် မေလမှာ မွေးဖွားသူတွေလိုပဲ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အရည်အချင်းတွေ ရှိပါတယ်။ သို့သော် သူတို့ဟာ စိတ်အပြောင်းအလဲ ပိုမြန်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီလမှာ မွေးဖွားသူတွေဟာ ပညာရေးဆိုင်ရာ အောင်မြင်မှုကြီးတွေ ရရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ လေ့လာမှုတွေမှာ သူတို့ဟာ ကျောင်းစမတတ်ခင် ရင့်ကျက်ဖို့ အချိန်ပိုများကြောင်း ပြသထားပါတယ်။ ကျန်းမာရေးအရ ဇွန်လဖွားကလေးတွေဟာ အလုံးစုံကျန်းမာကြပေမယ့် အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ၊ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ အန္တရာယ်တွေ အနည်းငယ် ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။
လေ့လာမှုတစ်ခုအရ ဇူလိုင်မှာ မွေးဖွားသူဆိုရင် ဒေါသစိတ်ကို ထိမ်းချုပ်ပြီး သင့်ရဲ့ emotional ဘဝကို ကိုယ့်ဘာသာ ထိန်းနိုင်စွမ်းရှိနိုင်ပါတယ်။ ပင်ကိုစွမ်းရည်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဇူလိုင်မွေးဖွားသူအများစုဟာ အနုပညာအရည်အသွေးရှိပြီး ဘယ်သန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးကောင်းသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ ထို့အပြင် ဇူလိုင်လမှာ မွေးဖွားတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ ပျိုဖော်ဝင် နောက်ကျတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သြဂုတ်လမှာ မွေးဖွားသူတွေဟာ အကောင်းမြင်သူ၊ အပြုသဘောဆောင်သူတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ကျန်းမာရေးရေးနှင့် ပတ်သတ်လာရင် အလွန်အမင်း အကောင်းမြင်ခြင်းနှင့်အတူလာတဲ့ စိတ်အပြောင်းအလဲတွေက စိတ်အတတ်အကျမြန် ရောဂါတွေဖြစ်လာနိုင်ခြေ မရှိပါဘူး။သင်ဟာ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ရင် အပျိုဖော်ဝင်နောက်ကျတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လူကြီးဘဝမှာတော့ ပိုကျန်းမာနိုင်ပါတယ်။
စက်တင်ဘာလမှာ မွေးဖွားသောသူတွေဟာ ယေဘုယျအားဖြင့် စိတ်ဓါတ်ကျတာ နည်းပါတယ်။ သင်ဟာ စက်တင်ဘာလမှာ မွေးဖွားခဲ့ပါက အားကစားဘက်မှာ အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိပါလိမ့်မယ်။ စက်တင်ဘာလမှာ မွေးဖွားတဲ့ ကလေးငယ်တွေဟာ ရောဂါဖြစ်ပွားမှု အလယ်အလတ်ရှိသော်လည်း ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေ မြင့်မားပါတယ်။ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ ရောဂါတွေကနေ ကာကွယ်မှုအချို့ ရရှိပါတယ်။
စက်တင်ဘာလမှာ မွေးဖွားသူတွေလိုပဲ အောက်တိုဘာဖွားတွေဟာ အားကစားမှာ ထူးချွန်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ဆောင်းဦးရာသီမှာ မွေးဖွားတဲ့လူအများစုဟာ အရပ်ရှည်သော်လည်း အောက်တိုဘာလလယ်မှာ မွေးဖွားသူတွေဟာ အရပ်ပိုမြင့်နိုင်ပါတယ်။ သင်ဟာ အောက်တိုဘာလမှာ မွေးဖွားခဲ့သူတွေထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်လျှင် ကျန်းမာရေးညံ့နိုင်ပါတယ်။ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ ပြဿနာဖြစ်တာ နည်းပါတယ်။
နိုဝင်ဘာလအပါအဝင် ဆောင်းဦးရာသီမှာ မွေးဖွားသူတွေဟာ အရမ်းအာရုံစိုက်ခံရလေ့ရှိပါတယ်။ စိတ်ဓါတ်ကျတာ နည်းပါးပြီး ၎င်းက သူတို့ရဲ့ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေကို ရောက်တဲ့အခါ ဘဝမှာ အားသာချက်တစ်ခု ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ အဆိုးမြင်ဝါဒသမားတွေ ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ နိုဝင်ဘာလမှာ မွေးဖွားသူတွေဟာ အခြားလတွေမှာ မွေးဖွားသူတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် ယေဘုယျအခြေအနေတွေမှာ အထူးသဖြင့် အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ အန္တရာယ်တွေ မြင့်မားသော်လည်း နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါတွေကနေ အကြီးမားဆုံး ကာကွယ်မှု ပေးနိုင်ပါတယ်။
သင်ဟာ ဒီဇင်ဘာလမှာ မွေးဖွားခဲ့ပါက ကမ္ဘာပေါ်မှာ အရှားပါးဆုံးသောသူတစ်ဦး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အထူးသဖြင့် သင့်မွေးနေ့က ၂၄ရက်, ၂၅ရက်ဆိုရင် ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ ပတ်သတ်ရင် သင်ဟာ စိတ်အနှောက်အယှက် အလွယ်တကူ မဖြစ်တတ်ဘဲ နွေရာသီမွေးဖွားသူတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် တည်ငြိမ်မှု ပိုရှိပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်ပါတယ်။ လေ့လာမှုတစ်ခုအရ သင့်မှာ ၁၀၅နှစ်နဲ့ အထက် အသက်ရှည်နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေး ပိုရှိပါတယ်။
သင်က ဘယ်လိုအမျိုးသမီးမျိုးလဲ? – သင့်မွေးလက ဖော်ပြနေတဲ့ သင့်ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအကြောင်း
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မွေးဖွားချိန်မှာ ကြယ်တွေ၊ ဂြိုလ်တွေရဲ့အနေအထားက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမှာ အများကြီးပြန်သက်ရောက်တဲ့ ရာသီဥတုအပေါ် သက်ရောက်မှု ရှိတယ်လို့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေနဲ့ နက္ခတ်ဗေဒင်ပညာရှင်တွေက ယုံကြည်ကြပါတယ်။ အလားတူပဲ သင့်မွေးလက သင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့် ဘယ်လိုအမျိုးသမီးမျိုးလဲဆိုတာကို ဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။ ၁။ ဇန်နဝါရီ သင်ဟာ ငြိမ်းချမ်းတဲ့အပြုအမှုနဲ့...
သင့်ရဲ့ရာသီခွင်အရ 2021 ခုနှစ်မှာ ကံကောင်းစေမယ့် အရောင်လေးတွေ
၂၀၂၁ခုနှစ်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ရာသီခွင်ပေါ်မူတည်ပြီး ဘယ်အရောင်လေးတွေက ကိုယ့်အတွက် ကံကောင်းစေမယ့် အရောင်လေးတွေလဲဆိုတာကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ၁။ ကြွက် (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) ၂၀၂၁အတွက် ကြွက်လေးတွေရဲ့ ကံအကောင်းဆုံး အရောင်က ပန်းရောင်၊...
Sagittarius (ဓနုရာသီဖွား)တွေရဲ့အကောင်းဆုံးနဲ့ အဆိုးဆုံးစရိုက်များ
Sagittarius လေးတွေက နက္ခတ်ဗေဒင်မှာ ၉ခုမြောက် ရာသီခွင်ဖြစ်ပြီး အလျှံပယ်ရှိခြင်း၊ ကံကောင်းခြင်းနှင့် အကောင်းမြင်ခြင်းရှိသော ကမ္ဘာဂြိုလ် ဂျူပီတာမှ အုပ်ချုပ်ပါတယ်။ ပြောင်းလဲနိုင်သော sign ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ Sagittariusရဲ့ စရိုက်တွေမှာ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ လိုက်လျောညီထွေ နေတတ်ခြင်း၊ အတွေ့အကြုံသစ်တွေနဲ့...